Mukwikwidzi weKufamba Agent Dzidzo: Sandals Resorts Executive Gordy Silverman Passes
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » vanhu » Mukwikwidzi weKufamba Agent Dzidzo: Sandals Resorts Executive Gordy Silverman Passes
Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Jamaica Kupwanya Nhau • Nhau Dzakanaka • nhau • vanhu • ushanyi • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Gordy Silverman Anopfuura
Gordy Silverman, Senior Director weIndustry Dzidzo kuUnique Vacations Inc. (UVI) uye mutsigiri wenguva refu wezvekufambisa vamiririri vakabatsira kugadzira chirongwa cheSandals Resorts 'Certified Sandals Specialist (CSS), akafa muna Chikunguru 24 zvichitevera kurwa pfupi nekenza. Aive nemakore makumi matanhatu nemana.
Silverman aive shasha yemafaro, akabatana neUnique Vacations Inc., Snadals Resorts neBeaches Resorts yakabatana, muna 1987.
Akakurumidza kuve kuvepo kweUVI kuWest Coast.
Kuzvipira kwaGordy kukambani uye ruzivo rweindasitiri yekufambisa kwakabatsira pakubudirira kweUVI.
Silverman akabatana neUnique Vacations Inc. Akatanga muhofisi yeUVI yeMiami asi akazotanga kuvapo kweUVI kuWest Coast. “Kuzvipira kwenguva refu kwaGordy kukambani uye ruzivo rweindasitiri yekushanya zvakabatsira pakubudirira kwedu. Achasuwa zvikuru, ”akadaro Sadler.
Akawedzera, “Gordy anogona kutsanangurwa zviri nyore sa'mai vevadzidzisi vese 'muindasitiri yekushanya. Akanga akabatanidzwa zvakananga mune yega yega yega chikamu chekambani yedu yekutengesa kudzidziswa kubva kumaBDM edu achangobhadharwa kune indasitiri yekufamba yakafara. Gordy akabudirira kugadzira uye akatanga yedu Certified Sandals Nyanzvi chirongwa. Kwemakore anopfuura makumi maviri nemashanu, anga ari wekutyaira muCSS Workshops, achichengeta mameseji ekutengesa uye kudzidzisa kutsva uye kwakakodzera kune vanopa mazano vekufamba gore negore. Iye zvakare akafunga edu akakurumbira 'kokorodzano,' zviitiko zvinodzidzisa asi zvinonakidza izvo zvakanyatsodzidzisa makumi ezviuru evarairidzi vekufamba nevashandi veindasitiri kuNorth America nepasirese pasirese Sandals & Beaches Resorts… Zviri nyore, Gordy akavaka hwaro uye hwaro hweiyo Yakasarudzika Zororo kudzidziswa kwekutengesa kwepasi uko isu nechikwata chatinodada nekumira nhasi. Naizvozvo, isu tese tinechikwereti naye nekusingaperi. ”
Vanachipangamazano vafambi uye vemaindasitiri shamwari vanokokwa kuti vape pfungwa uye ndangariro dzaGordy kuSandals Memory Jar ichigadzwa neshamwari yaGordy yakareba uye shamwari yeUVI, Maura Cecere ku [email inodzivirirwa] .